Hayadda kormeerka iskuullada oo loo qoondeeyey lacag dhaqaale dheeri ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ann-Marie Begler, agaasimaha guud ee hayadda kor-meerka iskuullada iyo Jan Björklund, wasiirka tacliinta. Sawirle: Victor Lundberg/Maja Suslin/Scanpix
Hayadda kormeerka iskuullada oo loo qoondeeyey lacag dhaqaale dheeri ah
La daabacay måndag 2 september 2013 kl 17.15
Miisaaniyadda sannadka foodda innagu soo haya ayaa loogu qoondeeyey lacag dheeri ah hayadda korm-meerka iskuullada, middaasina oo gaarsiisan 3,5 malyan oo koron sannadka foodda innagu soo haya iyo tiradaasi laba jibaarkeeda 7 malyan oo koron sannadaha xiga.
Goolka laga leeyahay miisaaniyaddaa dheeriga ayaa ah sidii hayadda loogu siin lahaa suurtagal iney dardar-geliso baaritaanka habka tacliineed ee iskuullada mulkida loo leeyahay iyo kuwa madaxa-bannaan iyo dhaqaalaha shirkadaha mulkida u leh, sida uu sheegay Jan Björklund, wasiirka tacliinta ee dalka Iswiidhen, isla-markaana ah hogaamiyaha xisbiga Shacabka (Folkpartiet):
- Ma dooneyno mulkiile daneeynaya lahaansho muddo yar ku kooban iyo siduu macaash degdeg ah ku heli lahaa. Sidaa daraadeed ayaa loogu baahdey kor u qaadidda wacyiga howl-wadeennada hayadda kor-meerka iskuullada. Waa muhiim in la arko iskuulladii mulkida loo yeeshey sannadihii sagaashameeyadii ey iminka bilaabeen is-bedel jiilashii xigey. Markaa muhiimad ayay ku fadhidaa in kor-meer lagu sameeyo. Waxaa laga daalacan karaa dhacdooyinkii la xiriirey shirkaddii JB Education.